Somaliland: Garabkii UCID Ee Wada Hadalada Oo Sheegay Inay Waddani Ku Biirayaan Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay Jamaal Cali Xuseen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Garabkii UCID Ee Wada Hadalada Oo Sheegay Inay Waddani Ku Biirayaan...
Somaliland: Garabkii UCID Ee Wada Hadalada Oo Sheegay Inay Waddani Ku Biirayaan Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay Jamaal Cali Xuseen
Garabkii Jamaal Cali Xuseen, gaar ahaan inta badan ee xubnihii wada hadalada kula jiray xisbiyada KULMIYE iyo Waddani, ayaa shalay ku dhawaaqay inay ku biirayaan xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, laakiin waxaan la socon Jamaal Cali Xuseen.
Xubnahan oo uu hoggaaminayay guddoomiyihii hore ee golaha dhexe ee xisbiga UCID Axmed Cismaan Sabce, ayaa ku dhawaaqay in tallo ururintii iyo wada hadaladii ay kula jireen xisbiyada KULMIYE iyo Waddani ay ku go’aamiyeen inay ku biiraan xisbiga Waddani oo ay sheegeen inay ka dhex arkeen dano qaran oo ay Somaliland ku horumari karto.
Suldaan Aadan, oo isna ka mid ahaa guddiga wada hadalada kula jirtay labada xisbi ee garabka Jamaal ayaa isaguna cadeeyay inay go’aamiyeen inay ku biiraan xisbiga Waddani.
Xildhibaan Qabile oo isna ka mid ahaa garabka Jamaal ee xisbiga UCID, ayaa sheegay inay xisbiga Waddani u arkaan xisbi hoggaamin kara Somaliland, waxaanu sheegay inay ku biirayaan xisbigaas.
Marwo Rooda Axmed Yaasiin, oo ahayd guddoomiyihi hore ee xisbiga UCID ee gobalka Saaxil, ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay ka mid noqon doonto dadka gooyada talada xisbiga Waddani oo ay sheegtay inay ku biirayaan.
Mujaahid Maxamed Haaruun, ayaa isna ka mid ahaa xubnihii halkaas ka hadlay ee soo dhaweeyay talada ay gaadheen guddigan wada hadalada u qaabilsanaa garabka Jamaal.
Hase yeeshee, Jamaal Cali Xuseen ayaa qoraal uu soo dhigay baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho, wuxuu kaga horyimid go’aanka guddiga, isagoo sheegay inuu maalmaha soo socdo cadayn doono halka uu ku biirayo. Jamaal wuxuu qoraalkiisa ku yidhi “Waxaan ku war gelinayaa dhamaan taageerayaasha, bulsho weynta Somaliland in shirkii jaraa’id ee maanta la sameeyey ee la yidhi Garabkii Jamaal Cali Xuseen ayaa meel ku biiray aanu matelaynin maqifkayga, iyo garabka aan hogaaminaayo. Guddiddi aanu u igmanay wadahadaladda in ay kala jabeen; oo ay jiraan masuuliyiin ka mid ah iyo madax kale oo doonay in ay meel ku biiraan runtii may ahayn in saxaafadda ka sheegaan arrin aan laysla ogeyn. Dadku waa kala fikrad, xorna way u yihiin, dadkii aanu soo wada shaqaynayna xaq bay u leeyihiin in ay ku biiraan meesha ay rabaan. Maadaama ay gudiddii wadahadaladu ay kala jabeen, waa inaan anigu go’aan qaataa. Haddaba aniga Jamaal ahaan halka aan u hogaaminaayo taageerayaashayeena waxaan soo sheegi doonaa ayaamahan soo socda inshallah. Laakiin way jiri karaan shakhsiyaad garabkayagii ka mid ah oo sugi kari waayey oo iyagu jeclaystay in ay meel ku biiraan sida dhacday maanta. HADDABA ILAA IMIKA MEEL AANU KU BIIRNAY MA JIRTO GARAB AHAAN. Inshallah waa inoo iyo ayaamaha soo socda.”